Home » Travel Associations News » World Tourism Network (WTN): Ny feo hafa ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany manerantany
Tambajotra fizahan-tany manerantany (WTN) iny feo efa ela niverenan'ireo orinasa kely sy salantsalany momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany. Amin'ny fampitambarana ny ezakay dia avo lenta ny filàna sy ny hetahetan'ny orinasa kely sy salantsalany ary ireo mpandray anjara aminy.
Ny WTN dia hatomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 2 Novambra ny mpikambana sy ny mpanorina ny fananganana.travel, resadresaka eran-tany amin'ireo mpitondra fizahantany any amin'ny firenena 120.
Amin'ny fampiarahana ireo mpikambana ao amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny sehatra isam-paritra sy manerantany, ny WTN dia tsy mpiaro ny mpikambana fotsiny fa manome feo ho azy ireo amin'ireo fivorian'ny fizahan-tany lehibe. WTN dia manome fotoana mety sy tambajotra ilaina ho an'ny mpikambana ao amin'ny firenena maherin'ny 120.
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiray antoka sy amin'ny fizahan-tany sy ny mpitondra fanjakana, WTN dia mikasa ny hamorona fomba fanavaozana ho an'ny fitomboan'ny sehatry ny fizahan-tany mahomby ary hanampy ireo orinasa kely sy salantsalany amin'ny fizahantany sy fizahan-tany mandritra ny fotoan-tsarotra sy sarotra.
Tanjon'ny WTN ny hanome feo ho an'ny mpikambana ao aminy feo mahery eo an-toerana sady hanome azy ireo sehatra iraisam-pirenena.
WTN dia manome feo politika sy raharaham-barotra sarobidy ho an'ny orinasa kely sy salantsalany ary manolotra fiofanana, torohevitra ary fotoana mety amin'ny fanabeazana.
Ny programa "Cities Tourism Cities of the World" an'ny WTN dia mamorona fotoana vaovao amin'ny alàlan'ny fampitambarana ny sehatra miankina amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina amin'ny fikatsahana fitomboana sy fampiroboroboana ny fizahan-tany fizahan-tany, fampiasam-bola, fivelomana, fiarovana ary fiarovana.
The "Famerenana indray ny dia" fandraisana andraikitra dia fifanakalozan-kevitra, fifanakalozana hevitra ary fampisehoana ho an'ny fomba fanao tsara indrindra ataon'ireo mpikambana ao amin'ny firenena mihoatra ny 120.
The "Maherifo momba ny fizahantany" Ny loka dia manaiky ireo izay mandeha lavitra manompo ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany fizahan-tany nefa matetika no tsy jerena.
The "Tombo-kase fizahan-tany azo antoka" manome ny mpiray antoka amintsika sy ny toerana itodihany sehatra hanehoany ny fahavononany hanokatra indray ny fizahan-tany soa aman-tsara.
Mba hahatratrarana ireo tanjona ireo dia mamporisika ny WTN ny fametrahana toko eo an-toerana, izay afaka hamaha ny olana manokana eo an-toerana sy manerantany ao anatin'ny toerana misy azy sy eo an-toerana.
Ny toko voalohany dia atsangana ankehitriny any Afrika, Faritra Balkan ary Hawaii.
Ny mpikambana ato aminay dia ekipanay.
Izy ireo dia ahitana mpitarika fanta-daza, feo mipoitra ary mpikambana ao amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana miaraka amin'ny vina tarigetran'ny tanjona sy fahatsapan'ny tompon'andraikitra tompon'andraikitra.
Ny mpiara-miasa aminay no herinay.
Ny mpiara-miombon'antoka aminay dia misy ny fikambanana tsy miankina sy ny fandraisana andraikitra any amin'ny toerana itodiana, ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, ny fiaramanidina, ny fisarihana, ny seho ara-barotra, ny media, ny consulting ary ny lobbying ary koa ny orinasam-panjakana, ny fandraisana andraikitra ary ny fikambanana.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba hidirana, lisitry ny mpikambana sy ny mpitantana ary koa ny hetsika ataon'ny World Tourism Network dia hita ao amin'ny tranokala WTN: www.tv.travel
Famelomana indray ny fizahan-tany any India: Ento eny amin'ny arabe